တရုတ်ကားသိုင်းကြိုးထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်း | Sinon Shengshi
မိမိစိတ်ကြိုက် Logo Hook ပြီးတော့ Loop Cable ကို Tie
ကုန်ပစ္စည်းခေါင်းစဉ်: ကားတစ်စီးဘေးကင်းလုံခြုံမှုထိုင်ခုံခါးပတ် 4.Practical အဘို့အချိတ်များနှင့်ကွင်းဆက် 2.Custom အရည်အသွေးမြင့်နိုင်လွန် webbing ချိတ်များနှင့်ကွင်းဆက်ကားတစ်စီးသိုင်းကြိုး 3.Nylon elastic webbing သိုင်းကြိုးချိတ်နှင့်ကွင်းဆက်သိုင်းကြိုးနှင့်အတူ 1.High အရည်အသွေးကို OEM လက်ခံနိုင်ဖွယ်အနိမ့်စက်ရုံစျေးနှုန်းကားတစ်စီးဘေးကင်းလုံခြုံမှု webbing ကြိုး ဒီဇိုင်းမော်တော်ကားနှာမောင်းစည်းရုံးရေးမှူး elasticity ကား-style အရောင်သိုင်းကြိုး Fixed မော်တော်ကားပြည်ထဲရေးသပ်ရပ်သိုလှောင်သေးဆက်စပ်ပစ္စည်း 5.Elastic သိုင်းကြိုးကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုပြုပြင်တာတွေတီးဝိုင်းဘက်စုံသုံးကားတစ်စီး boot တက်ကိုပြုပြင်တာတွေ: 1.Product: Hook နှင့်ကွင်းဆက်ကိုပြုပြင်တာတွေကားတစ်စီးသိုင်းကြိုး 2.Specifica ...
ချိတ်များနှင့်ကွင်းဆက်နှင့်အတူ 1.High အရည်အသွေးကို OEM လက်ခံနိုင်ဖွယ်အနိမ့်စက်ရုံစျေးနှုန်းကားတစ်စီးဘေးကင်းလုံခြုံမှု webbing ကြိုး
2.Custom အရည်အသွေးမြင့်နိုင်လွန် webbing ချိတ်များနှင့်ကွင်းဆက်ကားတစ်စီးသိုင်းကြိုး
ကားကိုဘေးကင်းလုံခြုံမှုထိုင်ခုံခါးပတ်အဘို့အ 3.Nylon elastic webbing သိုင်းကြိုးချိတ်နှင့်ကွင်းဆက်သိုင်းကြိုး
4.Practical ဒီဇိုင်းမော်တော်ကားနှာမောင်းစည်းရုံးရေးမှူး elasticity ကား-style အရောင်သိုင်းကြိုး Fixed မော်တော်ကားပြည်ထဲရေးသပ်ရပ်သိုလှောင်သေးဆက်စပ်ပစ္စည်း
5.Elastic သိုင်းကြိုးကိုပြုပြင်တာတွေတီးဝိုင်းဘက်စုံသုံးကားတစ်စီး boot တက်ကိုပြုပြင်တာတွေ
ပစ္စည်း: နိုင်လွန် + polyester
Size ကို:5* 20cm /5* 40cm /5* 60cm /5* 80cm တျွ
အရောင်: အဝါရောင်က Black / အပြာရောင် / / အစိမ်းရောင်, စိတ်ကြိုက်
ဒါဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားဖြင့် detach လုပ်လိုက်သောပေမယ့်, သင့်လက်ဖြင့်ပူးတွဲခြင်းနှင့် detach ဖို့လွယ်ကူခဲ့ဘယ်တော့မှမခိုင်မာတယ်။
4.Features & အသေးစိတ်ကို
USEAGE: Band ခြမ်းသင့်ကားရွေ့လျားသောအခါသင့်ရဲ့ပင်စည်ကနေအသံသင်လှည်းဖယ်ရှားပစ်ရနိုင်အောင်သင်ကစားစရာမှပုလင်းမှတစုံတခုကိုစုစည်းပြီးကူညီပေးသည်ကိုသင်မည်သည့်စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းမရှိဘဲမောင်းနှင်နိုင်ပြီးမည်သည့်ထူးဆန်းအရွယ်အစားထောင့်ယခုအသုံးဝင်သောဖြစ်လာလိမ့်မည်!
အားသာချက်များ: ဒီထုတ်ကုန်, ပူးတွဲရန်လွယ်ကူ detach ရန်လွယ်ကူခြင်း, သုံးစွဲဖို့လွယ်ကူပါတယ်။ ဒါဟာ easily.The Velcro ကော်သငျသညျအကွောငျးကိုဘယ်နေရာမှာမဆိုကိုယ့်ကို install ကူညီပေးသည်ကိုယ့်ကိုကိုယ်က install လုပ်နိုင်ပါတယ်ဆို vehicle.You အတွက်ဿုံမထိုက်မတန်လိမ့်မည်!
Material: အဆိုပါထုတ်ကုန်ပရီမီယံပစ္စည်းကိုဖန်ဆင်းသည်။ ဒါဟာတာရှည်ခံသည်နှင့်သင်အချိန်ကြာမြင့်စွာကကိုသုံးနိုင်သည်။ က၏နောက်ကျောအပေါ်တစ်ဦးမှော်စတစ်ကာတစ်ခုကိုအလွယ်တကူအချို့ပစ္စည်းများကို fixed နိုငျသညျ, ရှိပါသည်။
ယခင်: Customized black hook and loop ski strap/ski band with logo printed
မိမိစိတ်ကြိုက် Logo နှင်းလျှောကြိုး
ချိတ်ပြီးတော့ Loop elasticity သိုင်းကြိုး
ချိတ်ပြီးတော့ Loop Pallet သိုင်းကြိုး
ချိတ်ပြီးတော့ Loop သိုင်းကြိုး
Neoprene Hook ပြီးတော့ Loop သိုင်းကြိုး
Hook ပြီးတော့ Loop သိုင်းကြိုးတွင်ချုပ်
ပလပ်စတစ်နှင့်အတူ custom ဖက်ရှင်လက်ဝါးကပ်တိုင်အိတ်သိုင်းကြိုး ...
နေရပ်လိပ်စာ: 218A, Silicon Power ကမ, 10 Longgang လမ်း, Longgang ခရိုင်, ရှန်ကျန်းစီးတီး, ဂွမ်ဒေါင်းပြည်နယ်, တရုတ်, 518116 ။
ဖုန်းနံပါတ်: + 86-755 8994 2058